उपत्यकामा रहेका बधस्थलहरु अव्यवस्थित » खबरहरुको एउटै केन्द्र
उपत्यकामा रहेका बधस्थलहरु अव्यवस्थित
बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०७:२२ मा प्रकाशित !
२३ चैत​, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सबै पशु बधस्थल उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहेको बताइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पशु बधशाला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशालाका सहभागीले उपत्यकामा रहेका सबै पशु बधशाला नियमविपरीत रहेकाले सञ्चालन गर्न रोक लगाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कामपाका कार्यकारी प्रमूख ईश्वरराज पौडेलले पशु बधस्थलको अनुगमन गरी योज्ञ र अयोज्ञ भनी स्टिकर टाँस गर्ने बताए । पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिव डा वंशी शर्माले काठमाडौँ उपत्यकामा बधस्थलभन्दा पनि मासु सञ्चय गर्नका लागि ‘चिस्यान केन्द्र’ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उपत्यकामा दैनिक करिब ६०० देखि ७०० राँगा,भैँसी, एक हजार ५०० देखि दुई हजार खसी÷बोका र करिब दुईलाख किलो कुखुराको मासु र ३०० वटा बङ्गुर खपत हुने गरेको छ ।
उपत्यकामा पशुपक्षी बध गर्दा दैनिक ६० टन फोहर निस्कने गरेको र फोहर व्यवस्थापन गर्ने स्थानको अभाव हुँदा यसले मानव स्वास्थ्यमा अत्यन्तै असर गर्ने पशु बधशाला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डा नवीन शर्माले बताए ।
तराईमा आठवटा पशु बधशाला छन भने उपत्यकामा मापदण्डअनुरुपको एउटा पनि बधशाला नरहेको काठमाडौँ महानगरका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
PREVIOUS POST Previous post: नेपाल–भारत बैठकमा १९५० काे असमान सन्धिमाथि छलफल
NEXT POST Next post: दशौं संस्करणको आईपीएल आजबाट सुरु हुँदै
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०७:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०७:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०७:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०७:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०७:२२